Vaovao HUAWEI: fandefasana, telefaona, takelaka sy maro hafa - Androidsis | Androidsis (Pejy 5)
Ny Huawei P10 dia voasivana indray miaraka amin'ny efijery miolaka
Ny fandefasana vaovao dia mametraka antsika eo alohan'ny Huawei P10, ny isnignia sambo izay hanaraka ny Huawei Mate 9 miaraka amin'ny efijery miolaka
Huawei dia efa mivarotra mihoatra ny Samsung any Espana
Vetivety, tamin'ny volana Novambra tamin'ny taon-dasa, Huawei dia nihoatra ny Samsung tany Espana. Zava-misy manambara rehefa tsy misy afaka manakaiky an'i Samsung.
Ny Huawei P10 sy P10 Plus dia ho tonga amin'ny volana martsa na aprily
Ny sambo mpiambina vaovao an'i Huawei, ny P10 sy P10 Plus, dia ho tonga amin'ny volana martsa na aprily toy ny nitranga tamin'ny P9 sy P9 Plus.
Huawei dia efa nivarotra smartphone 140 tapitrisa tamin'ny 2016
Huawei dia mitady azy ary mamita taona mahafinaritra amin'ny fahafantarana amin'ny loharanom-baovao tsy fantatra anarana fa nahatratra ny tanjony 140 tapitrisa
Huawei Mate 9 dia 85 amin'ny kalitaon'ny sary ao amin'ny DxOMark
Ny Huawei Mate 9 dia aseho ho iray amin'ireo fitaovana avo lenta indrindra maka sary miaraka amin'ny isa 85 ao amin'ny DxOMark.
Mampanantena amin'ny fomba ofisialy i Huawei fa hanavao ny Honor 8 ho an'i Nougat amin'ny volana feb
Ny nampanantenaina dia trosa ary androany dia nanambara i Huawei fa ho fampanantenany lehibe dia hanana fanavaozana an'i Nougat amin'ny volana febroary ny Honor 8.
Ity no Honor Magic misy sisiny efatra miolaka
Raha ny sisin'ny Galaxy S7 an'ny Samsung dia miavaka amin'ny lafiny roa miolaka, ny Honor Magic dia manana efatra izay mifarana amin'izany famaranana manokana izany.
Ny Honor Magic an'ny Huawei dia mety ho voahodina amin'ny lafiny rehetra
Mba hanalavirana ny tenany amin'ilay Xiaomi Mi MIX sy ny "sisin'ny" Galaxy S7 sy S6, Huawei rahampitso dia afaka nanolotra ny Magic Honor amin'ny lafiny efatra miolaka
Finday smartphone "bezel-less" Honor Magic hotambara amin'ny 16 Desambra
Ny finday avo lenta toy ny Xiaomi Mi MIX no ananan'i Huawei miaraka amin'ny Honor Magic tsy misy bezel izay hambara amin'ny 16 Desambra.
Huawei handefa smartphone 'konsep' rahampitso eo ambanin'ny marika Honor
Rahampitso isika dia hanana gaga mahafinaritra avy amin'i Huawei miaraka amin'ny marika Honor miaraka amina telefaona misy hevitra izay hitondrany vaovao vitsivitsy.
Ny tasy voalohany ho an'i Huawei amin'ny tohiny madio, ny P8 dia lany ao Nougat
Huawei dia nahita ny tasy voalohany tamin'ny resume tsy misy fangarony voasokitra tao anatin'izay taona maro nihazakazaka ny toetr'andro tamin'ny Android.
Huawei Mate 9, ity no mpanjaka vaovao amin'ny tsenan'ny phablet
Fandinihana horonantsary feno ary amin'ny Espaniôla an'ny Huawei Mate 9, telefaona iray izay nanaitra anay tamin'ny kalitao sy ny fakan-tsary matanjaka misy rafitra masinina roa
Huawei dia manazava ny antony niandohany tamin'ny fanaovana ny Google Pixel
Huawei dia tonga mialoha hanome ny antony tsy naniriany nanamboatra ny Pixel ho an'ny Google. Manamarina ny tsaho ny 1 volana lasa izay.
Huawei dia nivarotra smartphone 9 tapitrisa Huawei P9
Huawei dia manana vokatra tsara eo an-tànany miaraka amin'ny Huawei P9 izay amidiny, satria namidy tamin'ny volana aprily, ny isan'ny 9 tapitrisa
Miresaka amin'i Juan Cabrera izahay, Huawei's Product Trainer, momba ny Mate 9
Miresaka amin'i Juan Cabrera izahay, mpanazatra ny vokatra Huawei, izay milaza amintsika ny tsiambaratelo rehetra momba ny Huawei Mate 9 sy ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Leica.
Ity ny EMUI 5.0, ny sosona manokana ampiasain'ny Huawei Mate 9
Atorinay anao ny tsiambaratelo rehetra momba ny EMUI 5.0, ny sosona manokana ampiasain'ny Huawei Mate 9 ary miorina amin'ny Android 7.0 Nougat
Huawei Mate 9, fiheverana voalohany amin'ny horonan-tsary
Fihetseham-po voalohany amin'ny horonantsary taorian'ny fitsapana ny Huawei Mate 9, ilay phablet vaovao an'ny mpanamboatra Aziatika ary misongadina amin'ny fakantsary sy ny kalitaon'ny famaranana.
Huawei dia manolotra ny Mate 9 miaraka amin'ny efijery 5,9 ″ sy fakan-tsary roa an'ny Leica
Huawei dia nanao ny Mate 9 ofisialy, phablet misy efijery 5,9 "ary fikirana fakan-tsary roa izay manana an'i Leica ho an'ny € 699.
Huawei dia nanambara ny fahatongavan'ny EMUI 5.0 ho avy
Huawei dia manambara ny fahatongavan'ilay sosona fanaingoana manokana EMUI 5.0 miaraka amin'ny phablet Huawei Mate 9 vaovao
Fampahalalana bebe kokoa momba ny Huawei Mate 9 Pro: hanana zoom optika 4X izy ary 1300 dolara ny vidiny
Ny Huawei Mate 9 Pro dia manatevin-daharana ny sarety avo lenta amin'ny vidiny tsy ampoizina ho an'ny telefaona avy amin'ny orinasa sinoa: 1.300 XNUMX $.
Huawei dia manolotra ny puce Kirin 960 octa-core 16nm vaovao misy Mali-G71 MP8 GPU
Huawei dia nanolotra ny chip Kirin 960 octa-core vaovao sy ny maritrano 16nm izay ho hita voalohany amin'ny Mate 9 izay haseho amin'ny volana novambra.
Sintomy ny lohahevitra Skin, tsara indrindra ho an'ny Huawei na Honor, lohahevitra izay manova tanteraka ny endrika Huawei
Androany dia te-hizara aminareo rehetra izahay hoe anio no hoditra tsara indrindra na lohahevitra feno ho an'ny Huawei na Honor. Mitombina ireo lohahevitra ho an'ny EMUI 4.0 sy 4.1.
Huawei Mate 9 miaraka amin'ny fakantsary roa an'ny Leica hambara amin'ny 3 Novambra
Amin'ny 3 Novambra dia efa manana daty manokana iray hafa isika hanamarihana ny tetiandro hanehoana ny Huawei Mate 9 vaovao miaraka amina fakantsary Leica roa
Ho tonga tsy ho ela ny Honor 6X, miaraka amin'ny fakantsary sy fakan-tsarimihetsika roa
Vetivety fa tsy taty aoriana dia hanana ny Honor 6X, terminal iray izay hampiavaka ny fakantsary roa ao an-damosina sy ny fantsom-panafody.
Vola Honor 1,5 mahery maherin'ny 8 tapitrisa no efa namidy tao anatin'ny roa volana voalohany
Vola 1,5 tapitrisa an'ny Honor 8 no amidy, terminal azo vidiana amin'ny € 399 ary misy efijery 5,2 ", RAM 4GB ary memoara 32GB.
Huawei Nexus 7P dia ho tablette avo lenta kokoa nefa kely
Sarimihetsika 7-inch ho an'ny takelaka Google izay ho tonga amin'ny faran'ny taona ary manamboatra an'i Huawei. Heverina ho avo lenta io.
Huawei Mate 9 sy Mate S2 dia hahazo fakantsary roa an'i Leica
Ny Huawei Mate 9 sy Mate S2 dia samy hahazo ny fakantsary fakantsary Leica amin'ny fiaraha-miasa indray hamokarana ity singa an-telefaona ity.
Manadihady amin'i Juan Cabrera, Product Trainer & Manager Force Field ao Huawei izahay
Nanararaotra niresaka tamin'i Juan Cabrera izahay, Huawei's Product Trainer, momba ireo zava-baovao natolotry ny hetsika nataon'ny mpanamboatra tao amin'ny IFA 2016
Huawei Honor 8 dia ofisialy any Eropa ankehitriny
Huawei dia manana telefaona hafa mahafinaritra miaraka amin'ny Honor 8 izay eo amin'ny sokajy 400-500 € hifaninana amin'ny marika hafa.
Huawei dia te-hampiasa indray ny famolavolana Nexus 6P amin'ny iray amin'ireo finday avo lenta vaovao izay hambara amin'ny volana ambony.
Ny Honor 8 dia ofisialy any Etazonia izao
Honor 8 dia finday avo lenta izay kinova tena mora vidy kokoa noho ny P9, sainan'i Huawei hahatratra an'i Etazonia.
Huawei's 8 ″ Honor Note 6,6 haseho amin'ny 1 Aogositra
Ny Huawei Honor Note 8 dia phablet misy ampahany lehibe izay mahatratra hatramin'ny 6,6 santimetatra ary misy vidiny lafo amin'ireo tombony omeny
Huawei dia nanambara ny Maimang 5 miaraka amin'ny efijery 5,5 ″ 1080p, puce Snapdragon 625 ary RAM 4 GB
Huawei dia efa manana telefaona finday iray hafa izay natomboka tany Sina, ny Huawei Maimang 5 miaraka amin'ny efijery 5,5 "sy ny puce Snapdragon 625.
Honor 8 dia ofisialy ankehitriny miaraka amin'ny fakan-tsary roa sy Kirin 950 puce
Ny Honor 8 dia ofisialy ankehitriny miaraka amina fakantsary aoriana mitovy amin'ny an'ny Huawei P9, izay mametraka azy amin'ny toerana manokana amin'ny fakana sary
Huawei dia manala ny ohatra sary amin'ny sary P9, nalaina tamin'ny fakantsary 4.500 $
Ary farany dia voatery nesorin'i Huawei ny sarin'ilay P9 rehefa nalaina tamina fakantsary $ 4.500
Huawei Y6II dia finday avo lenta fidirana vaovao manana endrika tanora
Ny mpanamboatra sinoa dia mandefa ny Huawei Y6II ho toy ny smartphone finday avo lenta izay kendrena amina mpihaino tanora kokoa ny endrika.
Huawei dia nahavita nizara smartphone maherin'ny 28 tapitrisa tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona
Tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona, Huawei dia nizara finday avo lenta mihoatra ny 28,3 tapitrisa, izay mametraka azy amin'ny toerana tsara hanohizana ny fitomboany.
Huawei dia miasa amin'ny rafitra fiasany manokana raha sendra misy olana ao amin'i Google
Huawei dia tsy te hiankina amin'ny Google ary efa miasa amin'ny rafitra fiasa ho an'ny fitaovana finday ao amin'ny foibeny any Scandinavia.
Layer namboarina EMUI 5.0 an'ny Huawei hahazoana endrika famolavolana lehibe ho an'ny fahalavoana
EMUI 5.0 dia soso-kevitr'i Huawei izay ho tonga amin'ny fararano ary hahazo endrika lehibe toa ny Android Android vanilla.
Ho an'ny fararano Huawei dia hanolotra terminal vaovao vonona amin'ny zava-misy virtoaly na VR izay ahafahana mampiasa DayDream, efa tafiditra ao amin'ny Android N.
Huawei hanambara ny fitaovana vonona Daydream amin'ny faran'ny 2016
Daydream no sehatra VR tafiditra ao amin'ny Android N izay manokatra ny lisitry ny gadget sy ny finday avo lenta izay ho tonga avy any Huawei, iray amin'ireo voakasik'izany.
Huawei dia nanambara ny Honor V8 miaraka amin'ny efijery 5,7 ″, Kirin 950 ary RAM 4GB
Huawei dia mamerina manangana saina vaovao miaraka amin'ny Honor V8 izay hiditra ao amin'ilay repertoire nananany tamin'ity taona manan-danja ity.
Ny Honor V8 tsy ho ela dia mampiseho ny fakantsary roa miaraka amin'ny sary tafaporitsaka
Amin'ity andiana sary ity dia ahitanao tsara ny fikirakira roa amin'ny fakan-tsary aoriana an'ny Huawei Honor V8, terminal izay haseho rahampitso.
Huawei G9 lite dia manao ny laharam-pahamehana amin'ny chip Kirin 650 / Snapdragon 617
Huawei dia manohy manitatra ny repertoire an'ny telefaona amin'ny alàlan'ny fanampiana iray hafa miaraka amin'ny Huawei G9 Lite izay efa afaka natokana any China.
Huawei dia mandefa fitaovana hafa miaraka amin'ny Honor 5C izay mahatratra hatramin'ny 139 $ raha ovaina. Terminal iray misy efijery 5,3 "sy puce Kirin 650.
Anio dia asehonay anao ireo fomba roa tokony hanavaozana ny Huawei P8 Lite ho an'ny Android M ofisialy ao anaty lesona video azo ampiharina tsikelikely.
Huawei Honor V8 miaraka amin'ny efijery Q5,7 10 ″ sy lohan'ny fakan-tsary roa aoriana hatramin'ny XNUMX Mey
Huawei dia manana telefaona hafa lehibe ao ambadiky ny seho miaraka amin'ny Huawei Honor V8 izay mbola manana fakan-tsary roa aoriana fa tsy hanana an'i Leica amin'ity indray mitoraka ity.
Huawei Honor V8 dia terminal Android izay ho tonga miaraka amin'ny rafitra fakan-tsary roa ao ambadika ary haseho amin'ny 10 Mey.
Mety ho fitaovana Nexus vaovao ve ny Huawei 7P?
Huawei dia nanoratra ny anarana hoe Huawei 7P, izay niteraka vinavina maro hafa toa ny mety hisolo azy io ho an'ny Nexus 7.
Huawei dia saika nankany amin'ilay talohan'ny takelaka misy P9 Max miaraka amin'ny efijery 6,9 ″
6,9 santimetatra ho an'ny Huawei P9 Max izay mametraka antsika eo alohan'ny phablet misy refy lehibe toy ny hoe nanana takelaka 7 "avy amin'ireo taloha isika
Huawei dia nanambara fitaovana iray hafa miaraka amin'ny MediaPad T2 10.0 Pro amin'ity volana ity izay anehoany ireo batalion'ny terminal misy azy.
Fihetseham-po voalohany taorian'ny nanandramany ny Huawei P9, telefaona avo lenta izay miavaka amin'ny famaranana sy fakan-tsary matanjaka miaraka amin'ny optika Leica sy sensor Sony.
Taorian'ny nanatrehako ny fampisehoana ny Huawei P9 Plus, androany dia mitondra anao ny fiheverana voalohany momba ity finday mahery vaika ity izay nahatonga ahy ho talanjona
Huawei dia nanambara ny P9 Lite miaraka amin'i Kirin 650 puce sy scanner an'ny dian-tànana
Taorian'ny fanambarana omaly momba ny P9 sy P9 Plus, androany Huawei dia gaga ny rehetra tamin'ny finday tsy nampoizina: ny Huawei P9 Lite
Huawei dia namoaka ny TalkBand B3 azo entina
Huawei dia nanolotra ny Talkband B3 vaovao azo ampiasaina omaly hiaraka amin'ny fanombohan'ny Huawei P9 sy P9 Plus
Huawei dia nanangana ny laharam-pahamehany Huawei P9, napetratsika teo alohan'ny Galaxy S7 handrefesana ny specs sy ny tanjaka
Huawei mandefa ny Huawei P9 sy P9 Plus
Huawei dia nanolotra minitra lasa izay ny P9 sy P9 Plus vaovao miaraka amina fakan-tsary miverina miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'i Leica, na dia tsy mitondra ny masin'ity marika ity aza izy
Huawei dia nivarotra telefaona maherin'ny 100 tapitrisa tamin'ny 2015
Ny varotra Huawei manaitra ny taona 2015: fitaovana maherin'ny 100 tapitrisa, mitantana ny fametrahana ny tenany ho orinasa telefaona fahatelo lehibe indrindra
Ny Huawei P9 dia hampiditra singa premium Leica ao anaty fakantsary
Ny Huawei P9 dia hanana singa kalitao premium avy amin'ny orinasa Alemanina Leica ao amin'ny fakantsary. Fifanarahana eo amin'ireo marika roa izay mety hiteraka zavatra lehibe
Ny fidiram-bolan'ny Huawei dia nitombo 37% tamin'ny 2015
37% no fiakarana nosoratan'ny Huawei amin'ny fidiram-bola amin'ny 2015, izay manamarina fa izy izao no mpamokatra fahatelo lehibe indrindra manerantany
Sarina bebe kokoa amin'ny Huawei P9 no voasivana
Saika ho fantatsika ny zava-drehetra momba ny Huawei P9 vaovao izay kely sisa tavela amin'ny famelabelarana azy amin'ny volana aprily avy amin'ny mpamokatra fahatelo lehibe indrindra
Huawei dia mamoaka teaser ofisialy P9 mifantoka amin'ny fakantsary roa
Efa manana teaser ofisialy ho an'ny Huawei P9 navoaka tao amin'ny kaonty Twitter izahay. Finday iray hananantsika mandritra ny herinandro vitsivitsy
Sivanina ny antsipirian'ny Huawei P9, P9 Lite ary P9 Max amin'ny fivarotana an-tserasera
Avy amin'ny fivarotana an-tserasera hanafarana telefaona sinoa mankany Etazonia, dia naseho ny antsipirian'ny Huawei P9, P9 Lite ary P9 Max
Ny Huawei P9 dia hatao amin'ny 6 aprily
Ny Huawei P9 dia haseho amin'ny 6 aprily any London araka izay azo atao amin'ny fanasana gazety nalefa
Ny 6 aprily no daty tokony hanombohana ny Huawei P9
@evleaks dia iray amin'ireo loharano azo antoka indrindra ary tamin'ity indray mitoraka ity dia namoaka fa ny 6 aprily no daty hanombohana ny Huawei P9
Navoaka ny sary an-gazety Huawei P9
Avy any Shina, nipoitra ireo sary an-gazety an'ny Huawei P9 izay manome antsika ny mombamomba ity terminal ity
Álvaro Galán, talen'ny vokatra an'ny Huawei, dia miresaka momba ny hoavin'ny orinasa eto amin'ny firenentsika
Nanadihady tamin'i Álvaro Galán, talen'ny vokatra ao Huawei, izay tsy nisalasala ny hamaly ny fanontanianay rehetra momba ny hoavin'ny orinasa
Huawei P9, sary tafaporitsaka vaovao ary izay rehetra fantatsika azo antoka hatreto
manana ny sary voalohany izahay izay manakaiky kokoa antsika amin'ny famolavolana farany an'ny Huawei P9, famolavolana mitohy
Ny sary tafaporitsaka vaovao an'ny Huawei P9 dia manamarina ireo mpanao taloha
Mbola misy herinandro sisa hanolorana ny Huawei P9. Androany isika mahalala sary voasivana vaovao
Huawei dia mampiseho lozisialy amin'ny fanasany ny hetsika 21 febroary
Huawei dia namoaka fanasana ho an'ny 21 febroary 2016 izay mampiseho stylus manaitaitra
Ny terminal Huawei vaovao, ny Huawei P9 dia haseho hatramin'ny kinova 4 samihafa izay manarona ireo tsena samihafa.
Avy amin'ny Twittter, Huawei dia nanambara ny fahatongavany ao anatin'ny 15 andro manaraka amin'ny Android 6.0 Marshmallow mankany amin'ny Huawei Honor 7
Ahoana ny fomba fiasan'ny fanomezam-boninahitra Honor?
Azavainay amin'ny antsipiriany ny fomba fiasan'ny serivisy fiantohana ny Honor, ny serivisy ara-teknikan'ny mpanamboatra aziatika
ny Honor 5X dia efa nahatratra ny tsena eropeana tamin'ny vidiny miraraka: 229.99 euro, ho an'ny telefaona manana antoka 2 taona eto amintsika.
Huawei dia iray amin'ireo zava-tsy ampoizina lehibe indrindra tamin'ny 2015, na dia efa tamin'ny 2014 aza dia nohazavaina fa hanana hafa lehibe ...
Amin'ity torolàlana azo ampiharina manaraka ity dia hampianariko anao ny fanavaozana ny Android M amin'ny alàlan'ny rindrambaiko Huawei ofisialy, ...
Huawei MediaPad M2 10.0 dia mandalo ao amin'ny FCC
Taorian'ny taona iray nahavariana niaraka amina finday 109 tapitrisa namidy, dia te hiditra amin'ny tsenan'i Etazonia i Huawei
Huawei dia nivarotra telefaona maherin'ny 109 tapitrisa tamin'ny 2015
Huawei dia namidy finday mahery maherin'ny 109 tapitrisa tamin'ny 2015, izay 45% mihoatra ny tamin'ny taona lasa.
Amin'ity taona ity ny variana fahefatra amin'ny andian-dahatsoratra P9 an'ny Huawei dia hampidirina ao izay hampidirina ireo kalitao tsara indrindra amin'ny fitaovana
Ny famolavolana ny Huawei P9 dia naseho tamina sary nalaina miaraka amina bokotra an-trano
Sketch navoaka avy any Shina dia mampiseho ny endrika manokana an'ny Huawei P9 izay misongadina amin'ny bokotra fonenany ara-batana, ny zorony boribory ary ny fakan-tsary faharoa
Huawei dia hitondra 6 GB RAM ho antsika ao amin'ny Huawei P9, tena ilaina ve izy ireo?
Huawei dia efa hanolotra ny P9 izay ho tonga miaraka amin'ny RAM 6 GB. Fahatsiarovana RAM izay hahafahan'ny rindranasa an-jatony ho ao aoriana.
Huawei dia manantena ny fahatongavan'ny Honor X3 amin'ny 5 Janoary miaraka amin'ny teaser
Rahampitso isika dia manana ny Honor X3 asehon'i Huawei ao amin'ny CES any Las Vegas ho an'ny takelaka vaovao avy amin'ity mpanamboatra ity
Huawei P9 dia azo aseho amin'ny CES 2016
Ny terminal vaovao an'ny mpanamboatra sinoa, ny Huawei P9, dia azo aseho mandritra ny CES 2016 any Las Vegas.
Huawei dia mamolavola ny GPUs azy manokana ary ny chip fahatsiarovana
Huawei dia mety mamolavola andalana GPUs ary flash drive mba ho lasa mpanamboatra mahaleo tena kokoa
Huawei P9 dia azo aseho amin'ny volana martsa 2016
Ny iray amin'ireo fitaovana manaraka an'ny mpanamboatra sinoa, ny Huawei P9, dia azo aseho mandritra ny telovolana voalohany amin'ny taona 2016 ho avy.
Huawei Mate 8 izao dia ofisialy miaraka amin'ny efijery 6-inch sy ilay puce Kirin 950 vaovao
Ny puce Kirin 950 vaovao no ho mpitaingina ny Huawei Mate 8 vaovao nambaran'ny mpanamboatra sinoa any Shanghai anio.
Ny terminal vaovao iray an'ny marika Honor dia nipoitra tato ho ato, ny Honor Play 5X.
Ny sary an-gazety sy ny toetra ara-teknikan'ny Huawei Ascend Mate 8 dia voasivana
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nilaza taminay ny momba ny hetsika nokarakarain'i Huawei ny rahampitso 26 Novambra izahay. Ny mpanamboatra Aziatika dia nandrasana hanolotra ny Huawei Ascend Mate 8. vaovao ary ankehitriny dia nisy andiana sary an-gazety navoaka, ho fanampin'ny toetra teknikan'ilay terminal, manamafy fa hanolotra phablet vaovao ilay goavambe sinoa.
Huawei Mate 8, ho toy izao ve?
Famaritana Huawei vaovao no voasivana ho sary mandika. Ity dia mety ho Huawei Mate 8 vaovao ary afaka mahita ny mazava alohan'ny faran'ny taona.
Mirongatra ny Huawei. Ilay mpanamboatra aziatika dia nanjary iray amin'ireo mpiady mahery vaika amin'ny tsena ho ...
Ny Nexus 6P dia ho hita amin'ny loko fotsy, mainty, volafotsy ary volamena
Ny terminal Huawei ho avy miaraka amin'i Google, ny Nexus 6P, dia ho hita amin'ny loko maro samihafa toy ny White, Black, Silver ary Gold.
Apple's Force Touch mitaona ny takelaka Android: ny raharaha Huawei
Huawei dia nahazo aingam-panahy avy amin'ny Apple's Force Touch hamorona efijery iray manana fahaiza-manao mahatsapa hihetsika arakaraka ny tsindry. Te hihaona aminy ve ianao?
Ny Huawei Mate S dia hita amin'ny loko telo
Ny phablet manaraka avy amin'ny orinasa any Shina, Huawei Mate S, dia hita tamina loko telo samy hafa talohan'ny fampisehoana ofisialy azy.
Te hanana Honor 7 mora vidy kokoa ve ianao? Hatramin'ny 31 aogositra dia 300 euro ny vidiny!
Honor dia namoaka fanentanana tena mahaliana ho an'ny Honor 7. Raha te hividy Honor 7 mora ianao ao amin'ny fivarotan'izy ireo dia amidiny 300 euro hatramin'ny 31 Aogositra.
Voninahitra 7 izao izao vonona ny hipetraka any Eropa
Amin'ny 27 Aogositra, Honor dia hanolotra ny kinova Eoropeanina an'ny Honor 7, ny sainam-pirenena vaovao an'ny sampana Huawei
Huawei's Nexus dia afaka mampiditra ny Snapdragon 810
Ny Nexus's Huawei dia afaka mampiditra ny kinova 2.1 an'ny Snapdragon 810 fa tsy ilay mpanodina vaovao novokarin'i Qualcomm, ny Snapdragon 820.
Horonan-tsary momba ny Huawei Nexus, tianao ho toy izao ve?
Lahatsary iray mampiseho izay mety ho endrik'i Huawei's Nexus. Te hanana izany ve ianao?
Honor dia nanolotra ny finday avo lenta farany, Honor 7i. Finday iray izay misy fakan-tsary 13 Megapixel mihodina.
Ity no Huawei Nexus
Manohy mivoaka izahay ary androany dia tsy maintsy miresaka momba ny Huawei Nexus ho avy isika.
Ity dia mety ho ny smartphone Huawei voalohany misy efijery miolaka
Huawei dia afaka manolotra amin'ny volana ho avy izay mety ho finday avo lenta voalohany misy efijery miolakolaka amin'ny tantarany.
Ity finday ity ve dia ny Huawei Ascend Mate 7 Plus na ny 7 Mini?
Ny haino aman-jery sinoa dia nanambara fa ny telefaona vaovao nandalo AnTuTu dia ny Huawei Mate 7 Plus na ny Huawei Mate 7 mini
Teasers maromaro an'ny Honor 7i no tafaporitsaka
Efa fantatsika ny anaran'ny telefaona Honoré enigmatika miaraka amin'ny fakantsary mihetsiketsika: Honor 7i
Hita amin'ny horonan-tsary ny heverina fa Nexus an'i Huawei
Mahatonga antsika hahita zavatra alohan'ny hitrangan'izany ny famoahana. Manantena isika fa hisy Huawei Nexus amin'ity taona ity izay toa tafaporitsaka tamin'ny horonan-tsary.
Honor mitazona finday avo lenta fakan-tsary finday fakan-tsary
Ny marika kely an'i Huawei natao ho an'i Eoropa, Honor, dia mitazona fitaovana misy fakantsary mihetsiketsika.
Androany ny ops dia hazaviko tsikelikely ny fomba hamohana ny Bootloader an'ny Huawei P8 Lite miaraka amin'ny alalana sy ny faneken'ny Huawei tenany ihany.
9 tapitrisa Honor 7 voatokana ao anatin'ny herinandro
Honor dia nahavita nitahiry singa maherin'ny 9 tapitrisa tao anatin'ny herinandro latsaka. Tarehimarika iray izay mampiseho ny fahasalaman'ny orinasa
Huawei Honor 7, nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny sainam-boninahitra Honor
Honor dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Honor 7, ilay terminal vaovao avy amin'ny mpanamboatra aziatika izay vidiny ambany noho ny 300 euro.
Huawei dia afaka nanolotra kinova maromaro an'ny Honor 7
Ankehitriny, rehefa manakaiky ny fampisehoana ny Huawei Honor 7 dia tsy mijanona ny fahatongavany ny tsaho momba ny fantsona vaovao an'ny mpanamboatra Aziatika.
Mpiasa Huawei UK tsy fantatra anarana dia manamafy fa hanao ny Nexus manaraka izy ireo
Mpiasa Huawei UK tsy fantatra anarana iray dia nanamafy fa ny Nexus manaraka dia novokarin'ny orinasa Aziatika ary ho tonga amin'ny faran'ny taona.
Nexus's Nexus dia eo an-dalam-pandrosoana
Antenaina fa mandritra ity taona 2015 ity, fitaovana Nexus roa no handeha eny an-tsena, ny iray amin'izy ireo dia ny Nexus's Huawei, eo an-dalam-pandrosoana.
Huawei P8 Max, ny kinova lehibe indrindra amin'ny Huawei P8 dia ho tonga amin'ny 24 Jona
Ny Huawei P8 Max, ilay terminal lehibe indrindra mandrapahatongan'ny mpanamboatra sinoa, dia hamely ny tsena amin'ny 24 jona.
Ny tsaho dia milaza fa hisy terminal Google roa amin'ity taona ity, saingy inona no ilain'ny Nexus 2015 toy ny taloha?
Efijery Huawei Mate 8, 2K, fakantsary Kirin 930 ary 20 megapixel?
Huawei Mate 8, ny sainam-piaramanidina matevina an'ny mpanamboatra Aziatika farany, tafaporitsaka ny sasany amin'ireo toetra ara-teknika
Sary nivoaka tamin'ny Huawei Mate 8
Ny phablet manaraka an'ny mpanamboatra sinoa, ny Huawei Mate 8 dia tsy afaka nandositra ireo fivoahana vaovao.
Huawei sy LG no mpanamboatra ny Nexus manaraka izay hivoaka amin'ity taona ity
Google dia hamoaka voalohany amin'ny tantarany, terminal Nexus roa amin'ity taona ity. Ny voalohany dia novokarin'i LG ary ny faharoa nataon'i Huawei.
Ny Nexus's Huawei dia mety hanana efijery 5,7-inch, vahaolana 2 ary Snapdragon 810
Ny Nexus manaraka an'i Huawei dia hanasongadina efijery 5,7 "santimetatra miaraka amin'ny fehin-kevitra 2K sy fampiasa Snapdragon 810.
Huawei dia hanolotra Honor 4C vaovao telo
Huawei dia hanolotra amin'ity herinandro ity fitaovana vaovao telo isanisany amin'ny isan-karazany amin'ny zotram-pitaovana Honor 4C vaovao.
Ny Huawei P8 Lite dia mitentina latsaky ny 250 €
Ny kinova tsotra indrindra, ny Huawei P8 Lite, an'ny sainam-pirenenan'ilay orinasa sinoa, Huawei P8, dia vidiny ambany 250 €.
Ho toy izao ve ny Nexus 5 2015?
Google dia afaka nandositra izay ho fantsony manaraka, hisy ny kinova an'ny Nexus 5 2015 ve?
Sarin'ny filan-kevitry ny Honor 7, miaraka amina sensor misy ny dian-tànana?
Nisy andiana sary an'ny Honor 7, mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Honor, navoaka an-tsokosoko, izay hisongadina amin'ny famaranana azy ary ny sensor-tanan'ny rantsantanana iray.
Ity no Huawei Honor 7 sy Honor 7 Plus
Andro vitsy lasa izay ny orinasa sinoa dia nanolotra ny sainam-bolany vaovao, ny Huawei P8 ary ankehitriny dia misy sary tafaporitsaka an'ny terminal manaraka ny Honor 7.
Huawei dia mandefa ny P8max miaraka amin'ny efijery 6,8-inch ary bezela manify be
Huawei P8Max no kinova «taloha» an'ny P8 vaovao, hainadinan'ny mpanamboatra sinoa amin'ity taona 2015 ity
Ity no Huawei P8 Lite
Huawei dia namoaka ny sainam-bolany vaovao, ny P8. Saingy toa miasa amin'ny kinova mora vidy kokoa ilay orinasa amin'ny anarana hoe Huawei P8 Lite.
Huawei dia manolotra amin'ny fomba ofisialy ny Huawei P8
Ny orinasa sinoa androany dia nanolotra ny sainam-piangonany vaovao, ny Huawei P8. Fantsona avo lenta izay mametraka avo be ny bara.
Lisitra ofisialin'ny terminal terminal Huawei izay havaozina amin'ny Android Lollipop
Efa manana ny lisitra ofisialin'ny fantsona Huawei izay havaozina amin'ny Android Lollipop isika, raha te hahalala ianao raha nahazo ny loteria fanavaozana ofisialy ny Android vaovao, aza misalasala mamaky ity lahatsoratra ity.
Huawei Watch dia ho tonga eo antenatenan'ny taona
Ny Huawei Watch, iray amin'ireo azo anaovana akanjo manana endrika mahazatra kokoa miaraka amin'io endrika boribory io dia hamely ny fampisehoana amin'ny tapaky ny taona
Tonga any Espana amin'ny fomba ofisialy ny Honor 4X amin'ny vidiny mirary: 200 euro
Honor dia nandefa fanambarana an-gazety nampahafantatra fa ny Honor 4X dia misy any Espana izao amin'ny vidiny tena manintona: 199.99 euro
Ity no volavolan'ny Huawei Ascend P8
Ny sary an-gazety sy ny toetra ara-teknikan'ny Huawei Ascend P8 dia voasivana, ankoatry ny Ascend P8 Lite, ny kinova kely an'ny Huawei titan vaovao
Huawei dia manomboka mampiroborobo ny P8, andiany voalohany
Amin'ny 15 aprily dia io no daty voatondro ao amin'ny kalandrie nataon'i Huawei hanehoana ny sainam-panahiny vaovao, ny P8.
Ny fandikana bebe kokoa an'ny Huawei P8 dia voasivana alohan'ny fampisehoana azy
Amin'ny andro ho avy dia hanolotra ny finday avo lenta manaraka ny orinasa sinoa fa alohan'ny hitrangan'izany dia efa afaka mahita ny fandikana ny Huawei P8 isika.
Nivoaka ny sary fampiroboroboana ny Huawei P8 Lite
Toa hanolotra fitaovana vaovao ity orinasa aziatika ity mandritra ny hetsika amin'ny 15 aprily, ny Huawei P8 Lite.
Nasiana sary vaovao an'ny Huawei Ascend P8
Sary iray vaovao an'ny Huawei Ascend P8 no tafaporitsaka, mampiseho ny skotozy terminal sy ny refy marina an'ny P8 vaovao
Sary nalaina tamin'ny fakantsary 13MP an'ny Huawei P8 no voasivana
Ny sary dia manampy an'i Huawei hampiseho ny kalitao izay sarobidy amin'ny fakantsary P8 amin'ny toe-java-maivana
Fivoahan'ny Huawei Ascend Mate 7 Mini raha oharina amin'ny G7
Huawei Ascend Mate 7 mini dia hita eo akaikin'ny G7 amin'ny sarin'ilay prototype alohan'ny handehanany amin'ny kinova farany
Honor dia manambara ny fahatongavan'ny Honor 4X sy Honor 6 Plus any Eropa
Nanambara i Honor fa ho tonga ara-dalàna any Espana ny Honor 4X sy ny Honor 6 Plus.
Efa ela no nahenoantsika tsaho momba ny Nexus vaovao ho an'ny taranaka vaovao. Ankehitriny, araka ny navoakan'ny vavahadin-tserasera GizmoChina, Huawei dia hamokatra iray amin'ireo Nexus vaovao.
Huawei P8, famaritana ary famoahana ny vidiny
Huawei P8 dia mety ho fitaovana voalohany miaraka amin'ny teknolojia 16nm noho ny puce Kirin 930 manana valo fototra
Huawei dia nilaza fa ny fampisehoana 4K dia tsy mendrika ny famoahana bateria avo lenta
Ny efijery iray misy ny vahaolana 4K dia misy fanjifana bateria avo kokoa ary izany no iray amin'ireo antony handaniam-potoana Huawei hampiasa io karazana efijery io
Huawei P8 amin'ny volana aprily miaraka amin'ny efijery 5.2-inch sy RAM 3GB
Ny efijery 5,2p 1080-inch an'ny Huawei P8 dia hahafahanao hanana fiainana bateria tsara manaraka ny fiandohan'ny Xperia Z3
Azontsika atao izao ny mividy ny Huawei Honor 6 Plus amin'ny Oppo Mart amin'ny vidiny mahaliana: 345 euro
Huawei dia namoaka ny Ascend GX1, "phablet" miaraka amin'ny efijery 6 and ary chip Snapdragon 410 quad-core
Huawei's Ascend GX1 dia mandinika manokana ny fanaovana ny ankamaroan'ny habaka anoloana amin'ny telefaona
Huawei nandefa Honor 6 Plus, finday avo lenta misy efijery 5,5-inch, puce octa-core ary 3G an'ny RAM
Huawei dia nanolotra ny Huawei Honor 6 Plus, telefaona 5,5-inch iray manontolo eo amin'ny efijery, RAM 3GB ary puce octa-core
Huawei dia nanolotra ny Huawei Ascend Mate 7 Monarch, ny kinova vitaminina an'ny phablet sinoa izay misongadina amin'ny kristaly safira.
Huawei Honor 4X, namoaka sary ary ny mampiavaka azy ireo ara-teknika
Navoaka ireo sary voalohany an'ny Huawei Honor 4X, izay handresy noho ny fakan-tsarimihetsika Huawei Kirin 620.
Honor 6, ny farany avo lenta farany ambany indrindra any Huawei dia tonga any Espana
Huawei dia mandefa marika vaovao any Eropa miaraka amin'ny Honor 6, terminal avo lenta amin'ny vidiny miraraka: 299.99 euro.
Huawei CEO koa mihomehy ny vaovao Iphone 6 Plus
Ny CEO an'ny Huawei dia nampakatra andiana sary maromaro tao amin'ny piraofilina Weibo izay nanesoany ny iPhone 6 Plus tamin'ny fampitahàna ny refy.
Huawei dia miandry ny fitaovana octa-core 6-inch vaovao amin'ny 4 septambra
Huawei dia manana ny zava-drehetra vonona amin'ny fitaovana vaovao ho tonga amin'ny fiandohan'ny volana manondro ny Ascend Mate 7 na D7 vaovao
Huawei dia mampiseho fitomboana 62% amin'ny fizarana smartphone amin'ny tapany voalohan'ny taona 2014
Huawei, mpanamboatra sinoa, dia eo amin'ny laharana fahatelo amin'ireo orinasa mivarotra finday avo lenta kokoa. Amin'ny Apple faharoa, amin'ny Samsung voalohany
Misy ny kinova Huawei Honor 6 misy RAM 4 GB hita ao amin'ny TENNA
Ny kinova an'ny Huawei Honor 6 misy RAM 4 GB dia vao nandalo ny fanamarinana TENNA.
Ny sarin'ny interface Huawei's Emotion 3.0 dia voasivana amin'ny fisehoana mitovy amin'ny an'ny iOS 7
Betsaka ny fitoviana misy eo amin'ny interface Huawei's Emotion 3.0 sy ny fomba fijery ao amin'ny iOS 7. Ankehitriny mbola hita ihany izay terminal hamoahana azy
Huawei dia manolotra ny processeur vaovao Huawei Kirin 920
Huawei dia nanolotra ny processeur Huawei Kirin 920 vaovao azy, biby 8-core izay mikendry ny hifaninana amin'ny Qualcomm Snapdragon 805
Huawei Ascend P7 dia nanambara
Nanambara ny Huawei Ascend P7 androany, terminal izay hivoaka amin'ity volana Mey ity amin'ny vidiny € 449 ary manohy ny fahombiazan'ny Ascend P6
Nivoaka ny sary vaovao an'ny Huawei Ascend P7
Betsaka ny sarin'ny Huawei ascend P7 no tafaporitsaka, ilay finday avo lenta aziatika vaovao izay haseho amin'ny 7 Mey
Ny fampisehoana ny Huawei Ascend P7 dia amin'ny 7 Mey any Paris
Fampisehoana ny Huawei Ascend P7 any Paris amin'ny 7 Mey, telefaona iray izay hitohy amin'ny sisiny sisa tavela amin'ny Ascend P6
Mendrika ve ny finday avo lenta an'ny Huawei natolotry ny ABC?
Raha efa hitanao ny fampiroboroboana ny finday Huawei an'ny ABC ary tsy fantatrao raha mifanaraka aminao izy ireo, anio dia manampy anao izahay manapa-kevitra amin'ny Androidsis miaraka amin'ny fanadihadianay.
Huawei Ascend P6 dia manomboka mahazo Android 4.4.2 KitKat
Ny Huawei Ascend P6 dia iray amin'ireo finday avo lenta indrindra noho ny sandany lehibe amin'ny vola sy ny vidiny ambany.
Mihamaro ny mpampiasa mitady phablet mora vidy ary Huawei dia manana ny vahaolana maneho ny Huawei Ascend Mate2
Miseho ny beta Android 4.4.2 an'ny Huawei Ascend P6
Huawei Ascend P6 dia mety efa manana Android 4.4.2 KitKat raha manavao azy io amin'ny firmware tafaporitsaka beta avy amin'ny XDA Forums.
Huawei Ascend Y530: fototra roa amin'ny vidiny mirary
Huawei dia nanolotra telefaona vaovao, Huawei Ascend Y530, miaraka amina processeur dual-core ary vidiny manomboka 149 euro
Nampiseho ny processeur an'ny Huawei Ascend Mate 2 3G
Huawei dia namoaka ny famaritana ny Huawei Ascend Mate 3G, izay handresy noho ny fitrandrahana quad-core amin'ny herin'ny 1.6GHz.
Sintomy ny Huawei File Manager miaraka amin'ny fitehirizana rahona 16 GB maimaimpoana
File Manager no fitetezana teratany ho an'ny terminal Huawei ary manome anao 16GB fitehirizana rahona maimaimpoana tanteraka.
Ireo tompona Huawei Ascend P6 rehetra ireo dia ao anaty vintana avokoa satria handray Android 4.4 KitKat ianao amin'ny volana Janoary.
Ny Ascend P6 izay manambatra ny hakanton'ny endrika amam-bika sy ny kalitaon'ny singa ao aminy dia nomena ho fakan-tsarimihetsika tsara indrindra amin'ny taona.
Huawei dia manambara ny kinova farany an'ny IU Emotion amin'ny horonan-tsary vaovao
Huawei dia nanolotra tamina horonantsary hoe ahoana ny interface UI Emotion vaovao, miaraka amin'ny fampiasana tsotra kokoa ary azo ampifanarahana kokoa aza.
Huawei Ascend P6, natolotra tamin'ny fomba ofisialy
Huawei dia nanolotra ny Huawei Ascend P6, ilay toeram-piasana vaovao an'ny orinasa, izay misongadina amin'ny famolavolana, ny heriny ary ny vidiny: 449 euro.
MWC 2013, manandrana ny Huawei Ascend P2
Avy amin'ny Androidsis izahay dia nanandrana ny Huawei Ascend P2 ary, na dia diso fanantenana tamin'ny famaranana plastika aza izy, dia misy bibidia iray sarotra zahana.
Huawei Ascend Mate, miaraka amin'ny efijery 6.1-inch
Huawei dia nanolotra fakan-tsarimihetsika misy efijery 6.1-inch izay kendreny hiditra amin'ny tsenan'ny phablet. Hahomby ve izy?
Huawei dia manolotra ny Y300 hiady ho an'ny antonony
Huawei dia nanolotra ny telefaona Huawei Y300 vaovao izay hikatsahany hanjakazaka ny elanelam-potoana amin'ny faran'ny 2012
Rom ho an'ny Huawei u8650 mifototra amin'ny Android 2.3.5, rom izay manome anao ny hafainganam-pandeha mahomby sy ny traikefa mikasika.
Huawei X6 sy Huawei X5, Android vaovao tonga
Terminal Android vaovao roa no hamely ny tsena, ny Huawei X6 ary ny Huawei X5